Titosy - Wikipedia
I Titosy na Tito dia Kristiana niara-niasa tamin' i Paoly avy any Tarsisy sy nanaraka azy tamin' ny dia lavitra nataony, ary lasa episkôpa na evekan' ny fiangonana tao Kreta (grika: Κρήτη/ Krêtê). Atao hoe Τίτος / Titos izy amin' ny teny grika fa Titus kosa amin'ny teny latina.
Araka ny Epistily ho an' ny Galatiana (Gal. 2.3) dia kristiana grika izy ka isan' ireo tsy tokony hoforana. Olona manan-talenta tamin' ny fifandraharahana i Titosy ka matetika dia nampamitaina iraka sarotra, nefa matotra sady mazava ny fitenenany. Niandraikitra ny famerenana ny filaminana teo amin' ny fiangonan' i Kôrinto izy sady nandamina ny fiangonan' i Kreta koa.
I Eosebio avy any Kaisarea dia mitatitra araka ny lovantsofina fa evekan' i Kreta manontolo i Titosy, sahala amin' i Timoty (na Timôte) izay evekan' i Efesosy (na Efezy na Efeso). Araka ny lovantsofina dia maty tao Gôrtina (grika: Γόρτυνα / Górtuna) ao atsimon' i Knôsôsy (grika: Κνωσός / Knôsós) i Titosy. Io tanàna io dia mbola ahitana bazilika mitondra ny anarany.
Epistily voalohany ho an'ny Korintiana
Epistily faharoa ho an'ny Korintiana
Epistily ho an'i Titosy
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Titosy&oldid=1000324"
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2021 amin'ny 07:41 ity pejy ity.